महिलाहरु कुन समय बढी उत्तेजित हुन्छन् ? – SawalNepal
महिलाहरु कुन समय बढी उत्तेजित हुन्छन् ?
एजेन्सी २०७५ फाल्गुन २७, सोमबार २१:५९ मा प्रकासित
यौन एउटा प्राकृतिक प्रक्रिया हो । महिला पुरुष दुवैलाई यौन चाहन्छि । अझ भन्नुपर्दा महिलालाई बढीमात्रामा यौन चाहना हुन्छ । तर महिलाहरुलाई यौन चाहना कहिले महसुस हुन्छ त्यो थाहा पाउन मुस्किल हुन्छ । उनीहरु पुरुषहरु जस्तै खुलेर यौनको लागि बोलावट गर्दैनन् । एउटा अध्ययनका अनुसार, महिनावारी पूरा भएको पाँचौंदेखि सातौं दिनसम्म महिलाहरुलाई बढी यौन चाहना हुन्छ । यो अवधिमा महिलालाई सहवासमा बढी आनन्द आउँछ ।
जर्मनीको युनिभर्सिटी अफ बेम्बर्गनका अनुसन्धाताहरू एक हजार युवा र युवतीमा सर्वेक्षणपछि उपयुक्त निष्कर्षमा पुगेका हुन् । सहभागीहरूलाई महिलासँग कुन समय यौनसम्बन्ध राख्दा उनीहरूलाई बढी आनन्द अनुभूति हुन्छ भन्नेबारे सोधिएको थियो । यौन विशेषज्ञहरूका अनुसार, महिनावारी पूरा भएको पाँचदेखि सात दिनसम्म यौनको ‘मुड’ मा बढी हुन्छ । महिनावारी पूरा भएपछि यौनका लागि उत्तेजित गर्ने हार्मोन सक्रिय हुन्छ ।
अनुसन्धाताहरूले त्यस अवधिमा युवतीहरूको मस्तिष्कको तरंगमा समेत निकै अध्ययन गरे । त्यस अनुसार, महिनावारीपछिको तीन दिनमा हुने सहवासले बढी रमाइलो अनुभूति दिन्छ । यस्तो किन हुन्छ रु पाँचौंदेखि सातौं दिनसम्म गर्भाधारणको सम्भावना बढ्छ ।
यसैले यस अवधिमा सम्पर्कको तीव्र इच्छा जागृत हुन्छ । त्यो सर्वेक्षणमा युवतीहरूले महिनावारीपछिका तीन दिन पूर्ण यौनानन्दको चाहना राख्ने गरेको बताए । उनीहरूका अनुसार, त्यो बेला पाइने यौनानन्द अन्य दिनको दाँजोमा निकै सुखद, आह्लादक हुन्छ । अध्ययनमा के पनि पाइयो भने, महिनैपिच्छे तीन दिन गरिने सहवासले वैवाहिक जीवनलाई बढी रमाइलो बनाउने रहेछ । विभिन्न अनलाइन बाट
महिलाका २ वटा स्तनको साइज फरक–फरक हुन्छ,कारण यस्तो छ
यौन सम्पर्क सुरु हुन अघि के चाहन्छ्न महिला?
हस्तमैथुनले शारीरिक तथा मानसिक फाईदा, अध्ययन भन्छ महिलाले बढी गर्छन्
उहाँ कोठामा मसँगै सुत्नुहुन्छ, तर…….हुँदैन, अब म के गरौ ?